Soosaarka xirfadeed ee qaybaha cirbadeynta baabuurta oo leh tayo la hubo |
Soosaarka xirfadeed ee qaybaha cirbadeynta baabuurta oo leh tayo la hubo
Qaybaha balaastiga gawaarida, taas oo ah, qalabka wax soo saarka oo ka samaysan caag gawaarida. Qaybaha caaga ah ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa gawaarida. Dhexdooda, qaybaha jidhka iyo qaybaha gudaha ayaa aad u badan, qaybaha gudahana waa kuwa ugu badan.
Qaybaha irbadaha otomaatiga
magaca sheyga:Qaybaha irbadaha otomaatiga
hawsha:Wax taaj oo kale duro / shubay centrifugal / machining CNC
Faa'iidooyinka qaybaha balaastigga baabuurta
(1) Miisaan fudud
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu caansan ee qalabka gawaarida polymer waa miisaankiisa fudud iyo xooggiisa sare. Sababtoo ah saamiga celceliska balaastigga kaladuwan waa 15-20% oo keliya birta caadiga ah, sidoo kale way ka fududdahay qoryaha caadiga ah. Muuqaalkani wuxuu si gaar ah faa'iido ugu leeyahay baabuurta waawayn ee dhaadheer, taas oo yareyn karta culeys badan.
(2) Astaamo heer sare ah oo jireed iyo kiimiko leh
Faa'iidada kale ee qalabka gawaarida polymerku waa inay leeyihiin shaqooyin badan oo loo isticmaali karo munaasabadaha gaarka ah. Balaastikadu waxay leedahay sifooyin nadiif ah oo wanaagsan, iska caabbinta daxalka u fiican, iska caabbinta gabowga, iska caabbinta wanaagsan iyo iska caabbinta, waxqabadka wanaagsan ee biyuhu ka soo baxaan iyo sifooyinka farsamada, guryaha isku xidhka wanaagsan, waxaana loo baaraandegaa noocyo kala duwan Noocyo kala duwan oo ah baabuurta gudaha iyo dibedda oo u baahan wax qabad badan shaqooyinka.
(3) Saamayn qurxan oo heer sare ah
Faa'iidada ugu caansan ee qalabka gawaarida polymer waa saameynta qurxinta wanaagsan. Waa laga baaraandegi karaa alaabooyin leh qaabab isku dhafan iyo midabbo badan hal mar, mararka qaarkoodna waxay u baahan tahay in la daabaco, la duubo, la dhejiyo, la dahaadho, iyo midabbo. Waxaa lagu farsameeyaa sawir aad u macquul ah, qaab iyo qaab, kaas oo ku dayan karaya qoryaha dabiiciga ah, birta, Qaabka maqaarka xayawaanka sidoo kale waa loo dhalaali karaa, loo duubi karaa, qalinna waa la geliyey, waa la dhex dhigi karaa, iwm.
(4) Waxqabadka wanaagsan
Sababtoo ah baaxadda qalabka polymerka iyo iswaafajinta wanaagsan ee qalabka kale, qaybaha kala duwan ee qalabka ayaa loo isticmaali karaa, iyadoo gacan laga helayo mashiinno kala duwan oo wax lagu farsameeyo oo casri ah, iyada oo loo marayo kala-soocid, cirbado la isku duro, kala-soocid, wax-ka-qabasho, dharbaaxo jabis Waxaa lagu baaraandegi karaa gawaarida polymer qalab qaabab kala duwan leh, sifooyin kala duwan, midabbo kala geddisan, iyo shaqooyin kala geddisan oo qaabab kale loo adeegsado, sida ku-shubidda tooska ah ee tubooyinka, astaamaha, taarikada, duridda alaabada leh qaabab kala duwan, isku darka filimada, iwm. Waxa kale oo loo samayn karaa midabyo kala duwan , interlayers, hollows, inserts and other products according to baahida. Waxay sidoo kale noqon kartaa mid labaad oo laga baaraandego iyadoo la raacayo shuruudaha, sida leexinta, feedhka, goynta, alxamida, iyo dhalaalida kulul ee alaabta farsamada. , Qabow qabow, isku dhafan, iwm.Kartida Bixinta: Eeg mugga iibsiga
Hore: Ku takhasusay soo saarida jilayaasha wiishka leh khibrad hodan ah
Qaybo ka duritaanka Automotive
Wax taaj oo kale duritaanka qaybo
Long-slider mc nylon slider waa tayo sare iyo d ...